China Hot inyauka inonamira firimu yeva insole vagadziri uye vanotengesa | H&H
Ine kana isina pepa pasina
Ukobvu / mm 0.015 / 0.02 / 0.025 / 0.035 / 0.04 / 0.06 / 0.08 / 0.1
Upamhi / m / 1.2m-1.52m seyakagadzirwa
Kunyorera nzvimbo 40-60 ℃
Unyanzvi hwekushandisa muchina wekupisa-kupisa: 100-140 ℃ 5-12s 0.4mpa
Iyo TPU inopisa inyauka inonamira firimu inoenderana nekubatana kwePV, chakagadzirwa nedehwe, jira, faibha uye zvimwe zvinhu zvinoda kudzikira kwakadzika. Kazhinji inoshandiswa kugadzira PU foam insole inova inochengetedza zvakatipoteredza uye haina chepfu.
Inofananidzwa nemvura yakasungwa glue, ichi chigadzirwa chinozvibata zvakanaka pazvinhu zvakawanda senge hukama hwesimbi, maitiro ekushandisa uye yakakosha kuchengetedza mari. Chete kupisa-kudhinda kugadzira, kunogona lamination kunoitika.
Tinogona kugadzira ichi chigadzirwa kana kana pasina substrate, zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Kazhinji, hombe roller roller laminating michina inoshandiswa kusungira machira kutsigira. Vazhinji vatengi havashandise substrate, kana vamwe vatengi vanoda firimu ine pe firimu substrate kana vachishandisa bata-pamubhedha laminating muchina. Tinogona zvakare kupa izvi. Iyo firimu yakagadzirwa neTPU yakapfava uye inogona kuwachwa, iyo inotsanangura kuti nei chigadzirwa ichi chakakurumbira. Uye zvakare, iyo yakawanda yemhando iyi ndeye 500m roll, yakajairwa upamhi i152cm kana 144cm, mamwe mahupamhi anogona zvakare kugadzirwa.
1. Kunzwa ruoko runyoro: kana yaiswa mune insole, chigadzirwa chichava neyakareruka uye yakapfeka kupfeka.
2. Mvura yekushambidza mvura: Inogona kuramba kanokwana kagumi kugezesa mvura.
5.Pointi yekunyunguduka yakadzika: inokodzera kesi dzekupenda senge jira rine yakadzika tembiricha kuramba.
PU furo insole
Kupisa kunyauka kunamatira firimu kunoshandiswa zvakanyanya pa insole lamination iyo inozivikanwa kugamuchirwa nevatengi nekuda kwayo yakapfava uye yakasununguka kupfeka kunzwa. Kunze kwezvo, Kutsiva yechinyakare kunamira kunamatira, kupisa kunyauka kunamatira firimu rave iro hombe dhizaini kuti zviuru zvehombodo zvigadzirwa vagadziri zvakaiswa kune kwemakore mazhinji.
L341B inopisa yakanyunguduka inonamira firimu inogona zvakare kushandiswa pamotokari mat, mabhegi uye mukwende, machira lamination.Sekureba sekunge kuri kwekubatana kwePU furo zvigadzirwa, isu tine hukama mhinduro. Kunyanya mukubatanidzwa kwemafuro emabhodhi zvigadzirwa, mhinduro dzemakambani edu munzvimbo ino dzakura zvakanyanya. Parizvino, tasvika pakubatana pamwe nemakambani anodarika makumi maviri emikwende kumba nekune dzimwe nyika, uye kushandiswa kwekupisa firimu inonamira inonamira mumunda wemikwende nebhegi kusanganisa yakawana mhinduro dzakanaka kwazvo.
Pashure: CPE firimu ye CPE apron - HH
Zvadaro: TPU inopisa yakanyungudutsa glue pepa re insole